သငျသညျ DMAA ယူမီကိုသိရန်ရှိသည် 10 အမှုအရာ | AASraw
သငျသညျ DMAA ယူမီကိုသိရန်ရှိသည် 10 အမှုအရာ
/ဘ‌‌လော့ခ်/ပြတိုက်/ သငျသညျ DMAA ယူမီကိုသိရန်ရှိသည် 10 အမှုအရာ
အပေါ် Posted 11 / 28 / 2018 by ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က ရေးသားခဲ့သည် ပြတိုက်.
DMAA ခန္ဓာကိုယ်အဆောက်အဦ, ခန္ဓာကိုယ်အဆီလောင်ကျွမ်းမှုကိုနှင့်ရေတိုရေရှည်မှတ်ဉာဏ်နှင့်တုံ့ပြန်မှုအရေးယူမှုများ၏တိုးတက်မှုများအတွက်ကူညီပေးသည်သောဒြပ်ထုတ်လုပ်မူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ ဤဆောင်းပါးသည် DMAA သောက်သုံးသောအကြိုးခံစားခှငျ့မြားနှငျ့ 1,3-dimethylamylamine ၏ဖြစ်နိုင်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလည်းပါဝင်သည်။
နားလည်မှု ဘာ is DMAA မည်သည့်စွမ်းဆောင်ရည်များကိုလည်းတိုးတက်စေနိုင်အားကစားသမားအဆိုပါဖြည့်စွက်သုံးစွဲဖို့ကိုဆင်းလာပြီမတိုင်မီအလေးပေးသင့်ကြောင်းအရာတစျခုဖွစျသငျ့သညျ။ ဓာတု dimethylamylamine များအတွက်ရေတိုပုံစံဖြစ်သော DMAA ယခင်ကသဘာဝ geranium ရေနံကနေတစ်ဦးထုတ်ယူဖြစ်ဟုယုံကြည်ခဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်သုတေသနပြုမှတဆင့်ပြုလုပ်မြဲမြံစွာတည်ထားပြီး 1,3dimethylamylamine ဒြပ်ဓါတ်ခွဲခန်းအတွက်ထုတ်လုပ်နေသည်။
ဒါ့အပြင်ဂျာဆင်းသက်လာမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူအလားတူဖွဲ့စည်းပုံ 1,3 DMAA, မူးယစ်ဆေးရှယ်ယာတောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဒါဟာလူအတော်များများ DMAA လည်းမူးယစ်ဆေး၏တူညီသောလူတန်းစားပိုင်ထင်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ခဲ့သည်. DMAA ကြိုတင်လေ့ကျင့်ခန်းကအဓိကအားဖြင့်၎င်းတို့၏ကာယဗလစတင်အစည်းအဝေးများဖြတ်တောက်ချင်တဲ့သူတွေကိုအသုံးပြုအဖြစ်ဖြည့်စွက်အသုံးပြုကြသောလူတို့နှင့်အတူပြောရလျှင်သောအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။
DMAA အမှုန့်ကိုပထမဆုံး 1944 အတွက်ဧလိ Lilly နှင့်ကုမ္ပဏီများအားဖြင့်ဈေးကွက်ထဲမှာယူဆောင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးတစ်ဦးနှာခေါင်း decongestant အဖြစ်ဆေးဝါးအတွက်အများကြီးအသုံးပြုခြင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ က ephedrine နှင့် Pseudoephedrine ၏အသုံးပြုမှုကိုအလားတူရလာဒ်များကယ်လွှတ်ခြင်းငှါရှာတွေ့ခဲ့သည်အတိုင်းမူးယစ်ဆေးဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
ပထမတော့လူအတော်များများ DMAA အဆိုပါနှင်းဆီ geranium ရေနံကနေဆင်းသက်လာခဲ့ယုံကြည်သည်။ ဤအကြောင်းသည်ထုတ်လုပ်ရန်များစွာကိုကုမ္ပဏီများကိုရှာဖွေဘုံဖြစ်ပါသည် DMAA ဖြည့်စွက် ထိုကဲ့သို့သောအမြစ်များနှင့်ပင်စည်အတိုင်းနှင်းဆီ geranium စက်ရုံအစိတ်အပိုင်းများဓါတ်ပုံတွေကိုညွှန်ပြ။ သို့သော်ကြာကြာရှိနေဆဲဟုဒီယုံကြည်ချက်ရှိနေသော်လည်း DMAA အပေါ်ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုမဟုတ်ရင်ပြသခဲ့သည်။
ဒါဟာ DMAA ဒြပ်ဓာတ်ခွဲခန်းများတွင်ရရှိသောကြောင်းသက်သေပြခဲ့ပြီးအဲဒါကိုရှည်လျားများအတွက်ယုံကြည်သည်ထားပြီးသကဲ့သို့သဘာဝအမဟုတ်ပါဘူး။ အားကစားသမားသည်၎င်း၏ရလာဒ်များအားဖြင့်အထင်ကြီးခဲ့ကြသကဲ့သို့စျေးကွက်မှ၎င်း၏ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပြီးနောက်မူးယစ်ဆေးဝါးလွန်ကဲကဲရောင်းချခဲ့သည်။ ဒါဟာဖြည့်စွက်စျေးကွက်မှဖယ်ရှားပစ်သောအခါ 1983 သည်အထိဖြစ်ခဲ့သည်။
ဆုတ်ခွာကြောင့်အများပြည်သူဆေးဝါးရောင်းချမည့်ဘေးကင်းလုံခြုံမဟုတျကွောငျးတောင်းဆိုမှုများအားဖြင့်သွေးဆောင်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်မှောင်ခိုဈေးကွက်တွင်ရောင်းချပေါ်တွင်ရှိနေဆဲသော်လည်းဤသည်မှာပိတ်ပင်မှုမူးယစ်ဆေးတစ်ခုရှားပါးမှုစေ၏။ ကသစ်တစ်ခုအမည်, Geranamine အောက်မှာကုန်သွယ်တဲ့အခါမှာ DMAA ဖြည့်စွက်၏ပြည်သူ့ရောင်းချ 2006 အတွက်ပြန်လည်စတင်ခဲ့ပါတယ်။
DMAA ဖြည့်စွက်တစ်ခုတည်းကိုသာရောင်းချခဲ့မခံခဲ့ရပါဘူး။ အဲဒီအစားသူကကိုယ်အလေးချိန်ဖြည့်စွက်အတွက်ထည့်သွင်းခဲ့ပြီးတစ်ဦးအားကစားစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှုမူးယစ်ဆေးအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ အများပြည်သူဓာတုဗေဒအတွက်မူးယစ်ဆေးများပြန်လည်လက်ခံကျင့်သုံးဖို့စွမ်းဆောင်ရည်များကိုလည်းတိုးတက်စေနိုင်အားကစားသမားရန်၎င်း၏အသုံးပြုမှုများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုအငြင်းပွားစရာများကိုခေါ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါစိုးရိမ်ပူပန်မှုများသည်အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှု (FDA) အဖြစ်ဝေးစိုးရိမ်ဖွယ်ရာဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေခြင်းမရှိဘဲအသုံးပြုမှုအတွက်၎င်း၏သင့်လျော်သောသက်သေပြနိုင်ရန်ဖြည့်စွက်၏ထုတ်လုပ်သူတောင်းဆိုနေတာအဖြစ်ရှိသည်ဒီတော့ဝေဖန်ခဲ့ကြပြီ။ ထိုကဲ့သို့သောကနေဒါအဖြစ်နိုင်ငံများမှာလည်း၎င်းတို့၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများပြင်းလာကြပါပြီ, ထိုသို့ပိတ်ပင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ 2010 ၌ရှိသကဲ့သို့ယှဉ်ပြိုင်အားကစားသမားအသုံးပြုရန်လည်းဘေးကင်းလုံခြုံမရဖြစ်ပြီး, ကမ္ဘာ့ Anti-Doping Agency ကမကြာသေးမီကအသုံးပြုမှုအတွက်တားမြစ်သည်သောအန္တရာယ်ဖြစ်စေပစ္စည်းဥစ္စာအဖြစ်စာရင်း။ ဒါကြောင့်မူးယစ်ဆေးသုံးပြီးခံရဖို့ကိုတွေ့ထားတဲ့အားကစားသမားယှဉ်ပြိုင်အားကစားအတွက်ပါဝင်ကနေတားမြစ်ပိတ်ပင်ဖို့အလွန်အမင်းဖွယ်ရှိသည်။ ယင်း၏အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်အငြင်းပွားစရာများ၏ရလဒ်အဖြစ် DMAA လည်းအမေရိကန်စစ်ဘက်အတွက်တားမြစ်သည်။
အဆိုပါဖြည့်စွက်မကြာသေးမီကယင်း၏အသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်စစ်တပ်စတိုးဆိုင်ကနေဆုတ်ခွာခဲ့သည်။ နယူးဇီလန်၌, မူးယစ်ဆေးဝါးအသုံးပြုမှုကိုလည်းခွင့်ပြုမထားပေ။ ဒါဟာအစသည်လက်ရှိတွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌တရားမဝင်ဖြစ်စဉ်းစားသည်။
အဘို့အ DMAA အဘယ်အရာကိုသုံးထားသလဲ?
DMAA ၏အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်ယန္တရားသက်သေပြနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ သို့သော်မူးယစ်ဆေးဝါးကသဘာဝ adrenaline ၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတူတဲ့မှထင်နေသည်။ အသုံးပြုမှုအပျေါမှာ, DMAA တိုက်ရိုက်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်သက်ရောက်သည်။
အဆိုပါမူးယစ်ဆေးဖိန်းဓာတ်၏အသုံးပြုမှုနှင့်အတူပြောရလျှင်ကြောင်းကိုမြင့်သောဆွထုတ်လုပ်ရန်လူသိများသည်။ သို့သော် DMAA ၏လုပ်ဆောင်ချက်၏ mode ကိုကဖိန်းဓာတ်၏ထံမှကွဲပြားခြားနားသည်။ ယူတဲ့အခါ, DMAA စိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်ကြောက်စိတ်ကာလအတွင်းမှာ activated သောဟော်မုန်းဖြစ်သော noradrenaline များ၏ထုတ်လုပ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ဟော်မုန်းမယ့်ကျောက်ကပ်အထက်တွေ့ရှိသော adrenal ဂလင်းအတွက်ဖန်တီးဖြစ်ပါတယ်။ ဖြန့်ချိပေါ်၌ဟော်မုန်းဟာသွေးထဲမှာဖြန့်ဝေ, ဤဟာနှလုံးခုန်နှုန်းတစ်ခုတိုးလာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဖြစ်ပါတယ်။
noradrenaline ထုတ်လုပ်မှုကိုလည်း glycogen သိုက်ကနေဂလူးကို့စဖြန့်ချိဖို့ကိုယျခန်ဓာ system ကိုလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တယ်။ ဤသည်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားအတွက်တိုးတက်လာသောစွမ်းအင်စီးဆင်းမှုကိုမှဦးဆောင်, ဤအများဆုံးအားကစားသမားတစ်ဦးယလေ့ကျင့်ခန်းမတိုင်မီအလိုရှိကြသည်တွင်အရာဖြစ်တယ်။ DMAA ၏အသုံးပြုမှုကိုလည်းထိုကဲ့သို့သောသတိပေးချက်များ, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်အချိန်တုံ့ပြန်မှုအဖြစ်အချို့သောရှုထောင့်ရှိအခြို့တိုးတက်မှုဆီသို့ဦးတည်ပါလိမ့်မယ်။
ဤသည် DMAA ကျယ်ပြန့်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်း session တစ်ခုစတင်မတိုင်မီအားကစားသမားအသုံးပြုသောအဘယ်ကြောင့်မူလတန်းအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးဝါးအားကစားသမားပိုလျှံစွမ်းအင်လောင်လိမ့်မည်ဟုတစ်လှုပ်ရှားမှုအတွင်းထိတွေ့ဆက်ဆံချင်အောင်မြင့်မားသောစွမ်းအင်ကိုတစ်ဦးခံစားချက်ကယ်တင်တတ်၏။ DMAA များအသုံးပြုမှုအသုံးအများဆုံးကဖိန်းဓာတ်၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုနှင့်အတူကြွလာသည်ဟုစွမ်းအင်၏ပျှမ်းမျှခံစားမှုကနေအားကစားသမားသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခဲ့ပါသည်။
DMAA ဖိန်းတစ်ခုတိုးတက်မှုဖြစ်ပြီး, ရှည်လျားသောများအတွက်အသုံးပြုရန်သောသူတို့အားတစ်ခုစွဲဖွံ့ဖြိုးဆဲစတင်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါဟာထိန်းချုပ်အသုံးပြုခြင်းကိုအလွန်အရေးကြီးသည်ဟုဆိုလိုသည်။ သုံးတဲ့အခါဒါဟာကြီးမားတဲ့စွမ်းအင်ကိုမြှင့်တင်ပေးနေတဲ့ခံစားမှုသွေးဆောင်ဖို့ဦးနှောက်ပြောခြင်းငှါ။
သွေးပေါင်ချိန်၏တစ်ဦးကမြင့်မားသောမြင့်တက်ဒီအတူ။ အရေးယူမှု၏ဤ mode ကို၏ရလဒ်အဖြစ်လူအတော်များများမူးယစ်ဆေးအလွဲသုံးစားလေ့ရှိပါတယ်။ သို့သော်အချို့အားကစားသမားများဟာသူတို့ရဲ့အလောင်းတွေပေါ်မှာအပြုသဘောဆောင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုနှင့်အတူမူးယစ်ဆေးအသုံးပြုပါ။ အောက်ပါ DMAA များ၏အပြုသဘောဆောင်အသုံးပြုမှုအချို့ကိုနေသောခေါင်းစဉ်:
1 ။ အဆီ၏မီးလောင်ရာ
အများအားဖြင့်, ခန္ဓာကိုယ်သဘာဝကျကျပိုလျှံအဆီလောင်ကျွမ်း။ သို့သော်ဤနှစ်လိုဖွယ်သောအရာကိုထက်နှေးကွေးမှုနှုန်းမှာဖြစ်ပျက်နိုင်ပါသည်။ ဖြစ်စဉ်အလျင်အမြန်မှဖြည့်စွက်၏အသုံးပြုမှုကိုအားကစားသမားတိုးမြှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကမွေးစားခဲ့သည်။ အများအားဖြင့်ထိုအဖြည့်စွက်အချို့ကဲ့သို့သော steroids များမှာ Nootropics.
ထိုကဲ့သို့သောဖြည့်စွက်၏အသုံးပြုမှုလုံလောက်စွာမီးလောင်ရာနှုန်းပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ DMAA ပိုလျှံဆီ၏မီးလောင်ရာအခြားလူသိများဖြည့်စွက်သကဲ့သို့ထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။ အများစုကလေ့ကျင့်ခန်းအစည်းအဝေးများသူတို့ကိုခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုမနှစ်လိုဖွယ်အယူခံဝင်ပေးသောအလွန်အကျွံခန္ဓာကိုယ်အဆီ၏လျှော့ချရေးဖြစ်ခြင်းတို့တွင်အအကြီးအကဲမြောက်မြားစွာရလဒ်များကိုအောင်မြင်ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးအသွေးသည်သွေးပြန်ကြောများ၏ပိတ်ဆို့မြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်အဖြစ်ပိုလျှံဆီကိုလည်းအားကစားသမားမြား၏သာယာဝပြောရေးရန်အန္တရာယ်ရှိ။ ဒီဖြစ်ပျက်လာတဲ့အခါအဲဒီမှာသွေးထဲမှာအောက်စီဂျင်တစ်ဦးအနည်းငယ်မျှသာစီးဆင်းမှုလိမ့်မယ်များနှင့်တစ်ဦးချင်းစီ၏အထွေထွေလှုပ်ရှားမှုမြင့်မားထိခိုက်နစ်နာပါလိမ့်မယ်။ အခုတော့ယင်းကဲ့သို့အခြေအနေမျိုးကိုရှောင်ရှားဖို့သော့ချက်စွမ်းအင်မြင့်မားနှင့်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းထိုကဲ့သို့သော DMAA အဖြစ်မူးယစ်ဆေးများအသုံးပြုခြင်းအားဖွငျ့ဖွစျသညျ။
လုံ့လရှိသူပြီးတာနဲ့အသုံးပြုသူစွမ်းအင်လောင်လိမ့်မည်ဟုလှုပ်ရှားမှုများတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ raring သည်နှင့်တစ်ဦးရလဒ်အတိုင်း, အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်နှင့်နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသောခန္ဓာကိုယ် fats.The မူးယစ်ဆေးတစ်ခုလျှော့ချရေးရှိပါလိမ့်မယ်ခန္ဓာကိုယ်အဆီများ၏မီးလောင်ရာအတွက်အလွန်ထိရောက်သောဖြစ်ရှာတွေ့ထားပြီ , ဤအထူးသဖြင့် offseason ဖြတ်တောက်ခြင်းစဉ်အတွင်းဒီအောင်မြင်ရန်လိုသူအားကစားသမားများအတွက်အရေးကြီးပါသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ထိရောက်မှုနီးပါးအဆမဲ့ပါပဲ။
ထိုကဲ့သို့သောဖိန်းဓာတ်အဖြစ်လှုံ့ဆော်နှင့်အတူဒွန်တွဲသည့်အခါ DMAA အကြောင်းကို 35% အားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ဇီဝဖြစ်စဉ်လှုပ်ရှားမှုတိုးတက်လာဖို့ကိုတွေ့ခဲ့သည်။ ဒီအလှည့်အတွက်, ကြီးမားတဲ့ထင်ရှားတဲ့ margin ကကောင်ဆီဥကိုမီးရှို့မှုနှုန်းတိုးတက်လာဖို့ကူညီပေးသည်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးကြောင့်အစပျိုးလိုက်ခြင်းသေချာနေဖြင့်အလုပ်ဖြစ်တယ် အဆီလောင်ကျွမ်းမှုကို အစောပိုင်းကသဘာဝကျကျပေါ်ပေါက်ဖို့အတှကျကိုယျခန်ဓာအချက်ပြမှုများကိုမီ။
DMAA ရဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကိုတိုက်ရိုက်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်နှင့်အမျှဆေးဝါးကပိုမိုမြန်ဆန်အရှိန်အဟုန်မှာဒီ action ကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်းကြောင်းသေချာ။ ဆွတွင် CNS အဆီမီးလောင်ရာကို enable ပြုလုပ်ကွင်းဆက်တုံ့ပြန်မှု inducing အားဖြင့်ဓါတ်ပြုပါသည်။ ဒါကြောင့်စျေးကွက်ရှိအခြားထိပ်တန်းအဆီလောင်ကျွမ်းမှုကိုဖြည့်စွက်အတူ DMAA ၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့မှန်ချင်ပါတယ်။
2 ။ ခန္ဓာကိုယ်အဆောက်အအုံ
တစ်ဦးယလေ့ကျင့်ခန်းမတိုင်မှီအရှိဆုံးအရေးပါအရာစွမ်းအင်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ရှေ့ဆက်သွားရရန်သင့်အားစွမ်းအင်ဤတုံးများကိုဖွယ်ရှိသည်အဘယ်အရာကိုကြည့်ရှုရန်လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပါပဲ။ ကြိုတင်လေ့ကျင့်ခန်း dmaa Mesomorph
အစောပိုင်းက captioned သကဲ့သို့, မူးယစ်ဆေး Pseudoephedrine အလားတူဖြစ်ကြောင်းသက်ရောက်မှုများကိုလူသိများသည်။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေးတစ်ဦး '' မြင့်သော '' mode ကိုသုံးစွဲသူရပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာအလေးမများအတွက်လိုအပ်သောကြောင်းကြီးမားတဲ့စွမ်းအင်ကိုအရံနှင့်တသားတပေးပါသည်။
အကောင်းဆုံးရလဒ်များကိုအဘို့, မြင့်မားသောစွမ်းအင်ကိုထောက်ပံ့ပေးမယ့်မူးယစ်ဆေးတစ်ဦးယလေ့ကျင့်ခန်း session တစ်ခုမတိုင်မီယူရပါမည်။ ဒီအတိုင်းစွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်အားကစားသမားသူတို့နေ့ရက်ကာလကိုမြင့်မားမှတ်ချက်အပေါ်စတင်ရန်လိုအပ်မယ့်အရာဖြစ်တယ်ကြောင့်စွမ်းအင်အကြိမ်ကြိမ်အတူအသုံးပြုသူပုံပါလိမ့်မယ်။ ထိုသို့သောမူးယစ်ဆေးခန္ဓာကိုယ်၏သဘာဝဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်များ၏တဦးတည်းသြဇာသက်ရောက်ခြင်းဖြင့်ဒီပါဘူး။
စားသုံးမှုပေါ်၌မူးယစ်ဆေးဝါး vasodilation ပိုကောင်းစေပါတယ်။ ဤသည်အလွန်အကျွံအပူလေထုထဲတွင်ရှိသည့်အခါပုံမှန်အားဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်သွေးပြန်ကြောများ၏အရွယ်အစားကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ဓါတ်ပြုပါသည်။ ဒါကအအေးများအတွက်အသားအရေရဲ့မျက်နှာပြင်ဖို့ပိုသောအသွေးကိုယူဆောင်လာရန်ရည်ရွယ်သည်။
အများစုကစွမ်းဆောင်ရည်-တိုးမြှင့်မူးယစ်ဆေးသွေးဆောင် vasodilation မှတဆင့်သွေးကြောများ၏တိုးချဲ့မှုကိုအားပေးအားမြှောက်ပြုလုပ်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ဆံ့။ ဤသည်အထူးသဖြင့်တစ်နေစဉ်အတွင်းယင်းအားကစားသမားများအတွက် ADDED အားသာချက်ဖြစ်ပါတယ် Pre-ယလေ့ကျင့်ခန်း။ ကြီးမားသောပြီးတာနဲ့ပိုသောအသွေးကိုတင်ဆောင်များအတွက်မျက်နှာပြင်ဧရိယာအလွန်အမင်းတိုးမြှင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုမတိုင်မီတည်ရှိဘယ်တော့မှသောသှေးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုစရိတ်နှင့်အတူအားကစားသမားများကိုပါလိမ့်မယ်။ နောက်ပိုင်းတွင်, ပြင်းထန်သောလေ့ကျင့်ရေးဖြစ်နိုင်, နှင့်အားကစားသမားကြွက်သားဖွံ့ဖြိုးရေးကိုမြှင့်တင်ရန်စွမ်းအင်ဝန်ရှိပါတယ်။
သို့သော်ဤလေးစားမှုအပေါ် DMAA ၏အသုံးပြုမှုကိုလူအများစုတစ်စွမ်းဆောင်ရည်-တိုးမြှင့်မူးယစ်ဆေးရည်မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်ဟုအဘယျသို့ဆန့်ကျင်ဖြစ်တွေ့ရှိထားသည်။ အဲဒီအစားအများဆုံးနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်မူးယစ်ဆေးများကဲ့သို့ vasodilation တိုးမြှင့်ခြင်း, DMAA ဆန့်ကျင်ဘက်ပါပဲ။ ဒါဟာလေထုအတွင်းအပူချိန်အနိမ့်အခါကာလအတွင်းမှာဘုံဖြစ်သော vasoconstriction ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ထိုကဲ့သို့သောထိုအချိန်တွင်ခန္ဓာကိုယ်က၎င်း၏အပူချိန်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ကြိုးစားနေရဆဲ, ဤအရေပြားရဲ့မျက်နှာပြင်ကနေအသွေးဆုတ်ခွာကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါသောက်သုံးသောအလွန်အကျွံမြင့်မားသည်နှင့် DMAA ယူစီစဉ်သူတစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ဦးကစိုးရိမ်ပူပန်မဖြစ်သင့်သောအခါဤသို့သော်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
3 ။ ရေတိုရေရှည်မှတ်ဉာဏ်နှင့်တုံ့ပြန်မှု action ကိုတိုးတက်စေရန်ကူညီပေးသည်
လူတိုင်းဟာသူတို့ရန်လိုအပ်ကြောင်းအရာအားလုံးကိုမှတ်မိဖို့ကိုချစ်လိမ့်မယ်။ လူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုက hard ဒီလိုဖြစ်ရန်အဘို့အစေမြောက်မြားစွာဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖြင့်ကြုံတွေ့နေကြသည်အဖြစ်သို့သော်ဤများသောအားဖြင့်အမှုမဟုတ်ပါဘူး။ DMAA ဒီမျက်နှာစာအပေါ်တစ်ဦးအထောက်အကူဖြစ်စေဖြည့်စွက်စေနိုင်ပါတယ်။
ဒီဖြည့်စွက်၏အသုံးပြုသူပြုသောအမှုလေ့လာရေးပါဝင်ပတ်သက်သူတွေကိုကအသုံးမပြုခင်ထက်ပိုကောင်းတဲ့ရေတိုရေရှည်မှတ်ဉာဏ်ရှိခဲ့ကြောင်းထင်ရှားပြီ။ များသောလူများကဤရရှိ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာနှင့်အတူမူးယစ်ဆေးယူလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းထိုကွောငျ့,, က add-on တစ်ခုက၎င်း၏စားသုံးမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုအဖြစ်ရောက်လိမ့်မည်။ ထိုများစွာသောလူကဒီ၎င်းတို့၏စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းမရှိဘဲဖြစ်ပျက်ပင်ကိုယျတျောသ DMAA သုံးပြီးထံမှစပါးကိုရိတ်သောမူလတန်းအားသာချက်ထဲကတစ်ခုပါပဲ။
မြင့်မားသောတုံ့ပြန်မှုအရေးယူမှုလည်းအများအပြားအားကစားသမားအတွေ့အကြုံကိုရန်ဆန္ဒရှိလိမ့်မယ်လို့တစ်ဝိသေသဖြစ်ပါတယ်။ DMAA ၏အသုံးပြုမှုကိုခန္ဓာကိုယ်မြင့်မားတပ်လှန့်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်စေသည်, ဤစွမ်းဆောင်မှုသွက်လက်ပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ ဤသည် DMAA အသုံးပြုသူများသည်အထူးသဖြင့်ကာယဗလကာလအတွင်းသို့မဟုတ်ပြိုင်ပွဲတွင်ပိုမိုတက်ကြွစွာဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုသည်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝြဖစ်၏နှုန်းတိုးတက်စေခြင်းဖြင့်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
ဤသည်နောက်ပိုင်းတွင်ခန္ဓာကိုယ်လုပ်ငန်းစဉ်များပုံမှန်ထက်လျင်မြန်သောနှုန်းဖြင့်ပေါ်ပေါက်ဖို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤသည်ဒါတက်ကြွစွာနဲ့တပ်လှန့်သူသည်တစ်ဦးချင်းရှိခြင်းအားဖြင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမြင်သည်။ သို့သော်ဤအထူးသဖြင့်မျက်နှာစာပေါ်တွင်သာချေပြိုင်ပွဲအတွက်မူးယစ်ဆေးများအသုံးပြုမှုအားပိတ်ပင်တားမြစ်သည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ထို့ကြောင့်, အားကစားသမားစဉ်အတွင်းတုံ့ပြန်မှု action ကိုတိုးတက်လာဖို့က၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုခွင့်ပြုမထားပေ။ ဒါဟာသို့သော်နေဆဲမြန်နှုန်း၏ bulk နှင့်တိုးတက်မှုအောင်မြင်ရန် offseason ကာလအတွင်းအားကစားသမားအသုံးပြုသောနိုင်ပါသည်။
DMAA ဖြည့်ကို Safe ဖြစ်ပါသလား
ဤသည်ယှဉ်ပြိုင်ဂိမ်းထဲမှာပါဝင်မည်သူမဆိုများအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်သင့်ပါတယ်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးကမ္ဘာ့ doping အဖွဲ့အစည်းကအသုံးပြုရန်မလုံခြုံသောမူးယစ်ဆေးဝါးများကြားတွင်စာရင်းဝင်ခဲ့သည်။ တခြားအလောင်းတွေအထူးသဖြင့်တရားစီရင်မှုအတွက် DMAA ၏ကန့်သတ်အသုံးပြုမှုရှိသည်။ သို့သော်ဤကျယ်ပြန့်ကွဲပြားအမြင်များရေးဆွဲထားပြီးတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် '' အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှု (FDA) ကအေဂျင်စီ DMAA ဖြည့်စွက်လူ့စားသုံးမှုများအတွက်အန္တရာယ်မကင်းဖြစ်စဉ်းစား။ အဆိုပါအေဂျင်စီကြောင့်အသုံးပြုရန်လုံခြုံမူးယစ်ဆေးဖြစ်ငျြးပွညျ့မီကြောင်း DMAA ၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုနှင့် ပတ်သက်. မပါသတင်းအချက်အလက်ရှိကွောငျးစောဒကတက်သည်။ အေဂျင်စီရဲ့ဝဘ်ဆိုဒ်တွင်, ခန္ဓာကိုယ်ကကျန်းမာရေးဘေးအန္တရာယ်များ၏အန္တရာယ်မှာသူတို့ကိုရတဲ့နိုင်စွမ်းအဖြစ်အားလုံးကုန်ကျစရိတ်မှာမူးယစ်ဆေးသုံးပြီးရှောင်ရှားရန်လူတွေကိုအကြံပေး။
FDA က၏အဓိကစိုးရိမ်ပူပန်မှုတစ်ခုမှာ vasoconstriction ဖြစ်ပေါ်စေဖို့အတွက်မူးယစ်ဆေးများ၏စွမ်းရည်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ငြင်းခုန်ဤသည်အစောပိုင်းအလုံအလောက်မကိုင်တွယ်လျှင်နောက်ဆုံးတွင်သေသတ်ခြင်းကိုအမှန်ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သည့်အဆင့်မြင့်သွေးဖိအားတစ်ခုရှေ့ပြေးဖြစ်ပါတယ်။ DMAA ၏အသုံးပြုမှုနှင့်အတူကြုံတွေ့ခံရဖို့များပါတယ်အခြားအသက်ရှူလမ်းကြောင်းအပေါ်သက်ရောက်မှုများအသက်ရှူအတွက်အခက်အခဲများ, နှလုံးရောဂါနှင့်သိမ်းယူမှု၏မြင့်မားသောဖြစ်နိုင်ခြေများပါဝင်သည်။
FDA ကအဆိုအရမူးယစ်ဆေးများအသုံးပြုခြင်းကိုလည်းအဓိကအားဖြင့်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်လွှမ်းမိုးမှတဆင့်လုပ်ကိုင်အဖြစ်အာရုံကြောချို့ယွင်းစေဖွယ်ရှိသည်။ ဒါကြောင့်သွက်ချာပါဒအဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့သောအခြားဆိုးဝါးဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်အတိုင်းဤအန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါသည်။
FDA က DMAA င်ဖြည့်စွက်တခုလုံးကိုစျေးကွက်ကနေတိုက်ဖျက်ဖြစ်ကြောင်းသေချာအတွက်ဒါဒဏ်ခံဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ဆောင်ရွက်ဘူးသောအမျိုးမျိုးသောခြေလှမ်းများအကြား Key ကိုဖြည့်စွက်် DMAA ရောင်းမှသူတို့ကိုပူနွေးလာသည်ကြောင်းအက္ခရာများနှင့်အတူမူးယစ်ဆေးဓာတုဗေဒထုတ်ပေးသည်။ သူတို့ကစင်ပေါ်အပေါ်ယင်းသို့ဖြည့်စွက်ရှာတွေ့မှဖြစ်ပျက်လျှင်, အေဂျင်စီကရောင်းသူသူတို့ကိုဖျက်ဆီးနှင့်ထုတ်လုပ်သူများထံမှအခြားအလို့ငှာအောင်မှရှောင်ကြဉ်ရန်ကမေးတယ်။
ဒီတော့ဝေး, များစွာသောကုမ္ပဏီတွေလိုက်နာခဲ့ကြပြီ။ ဤသည်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး 2012 စတင်ခဲ့ပြီးနှင့် DMAA ဖြည့်စွက်၏လက်ရှိအလွန်နိမ့်ရောင်းချခြင်းရှိသကဲ့သို့အပြည့်အဝအကျိုးသက်ရောက်မှုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ အချို့ကုမ္ပဏီများပင် FDA ကအားဖြင့်ရပ်တန့်ဖို့တောင်းခံရပြီးနောက် DMAA ထုတ်လုပ်ရန်ဆက်လက်မထွက်ရလည်းရောဂါဖြစ်ပွားမှုရှိခဲ့သည်။
USPLabs လို့ခေါ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကဖြည့်စွက်ထုတ်လုပ်ရပ်တန့်ရန်ငြင်းဆန်သည့်အခါထိုသို့သောအမှုများကို 2013 အတွက်မျက်မြင်ခဲ့ကြသည်။ FDA ကသူတို့ရဲ့စစ်ဆင်ရေးရပ်တန့်နှင့်မေးခှနျးအတှကျအတွက်ကုမ္ပဏီဈေးကွက်ထဲမှာရှိပြီးသားပါသောထုတ်ကုန်ကိုဖကျြဆီးခဲ့ကြရသည်။ သူတို့ရဲ့ projected လက်လီတန်ဖိုးကိုအကြောင်းကို $ 8 သန်းရှိခဲ့သည်။
ဒါကအေဂျင်စီ DMAA ဖြည့်စွက်၏ထုတ်လုပ်မှုရပ်တန့်လျက်နှင့်မတူညီတဲ့တစ်ခုတည်းသောမူးယစ်ဆေးနိုင်ငံ၏နိုင်ငံသားများမှ၎င်း၏လမ်းတွေ့မှယူဆောင်ကြောင်းသေချာသွားဆန္ဒရှိသည်မည်မျှဝေးပြသထားတယ်။ FDA ကနေတဲ့ခြေလှမ်းနောက်ထပ်သွားပြီနှင့်ထုတ်လုပ်သူသူတို့ DMAA စားသုံးကြသည်ဟုသိမှတ်ရာမှစားသုံးသူကာကွယ်တားဆီးဖို့ကိုသုံးနိုင်သည်သောအမျိုးမျိုးသောအမည်များစာရင်းသိရသည်။ အေဂျင်စီကုမ္ပဏီအများအပြားတိုက်ရိုက်ပိတ်ပင်ထားမူးယစ်ဆေးဖော်ထုတ်ထံမှစားသုံးသူကာကွယ်တားဆီးဖို့ရုပ်ဖျက်ပေးအမည်များအတွက်မူးယစ်ဆေးထုတ်လုပ်ခဲ့ကြသည်သဘောပေါက်ပြီးနောက်ဤသည်ဖြစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါနာမည်ပျက်စာရင်းအမည်များတချို့က Geranamine နှင့် Methylhexanamine ပါဝင်သည်။ အခြားကုမ္ပဏီများသည့်ဖြည့်စွက် Geranium စက်ရုံကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူပါရှိသည်ဖော်ပြသည်။ ဤသည် DMAA ၏ရှေ့မှောက်တွင်တစ်ဦးညွှန်ပြချက်ဖြစ်ပါသည်။ FDA က Geranium ထံမှကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူပါဝင်သောမည်သည့်ဖြည့်စွက်သတိထားဖြစ်စားသုံးသူသတိပေးလိုက်သည်။
အဆိုပါကန့်သတ်ထိုကဲ့သို့သောကနေဒါနှင့်နယူးဇီလန်နှင့်ကမ္ဘာအများအပြားအခြားသူတွေကဲ့သို့သောအခြားနိုင်ငံများတွင်ဆင်တူသည်။ အားလုံးအပေါ်မှာအဓိကစိုးရိမ်ပူပန်အသက်ရှူမှုစနစ်တစ်ခုလုံးကိုအပေါ်သက်ရောက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ Anti-doping အေဂျင်စီလည်းစာရင်းဝင်ထားပါတယ် DMAA အမှုန့် လူ့အသုံးပြုမှုအတွက်အန္တရာယ်မကင်းဖြစ်ကြောင်းမူးယစ်ဆေးအကြား။ ဤသည်ကထိုကဲ့သို့သောကမ္ဘာ့ဖလားအဖြစ်ပြိုင်ပွဲများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသောအားကစားသမားအသုံးပြုရန်ပိတ်ပင်ထားကြောင်းဆိုလိုသည်။
DMAA လုံခြုံသည်ဖြစ်စေ၏ခေါင်းစဉ် FDA ကနှင့်အခြားကုမ္ပဏီများမှအကြားအမျိုးမျိုးသောတရားစွဲမှုပြီးနောက်အခြားလှည့်ကွက်ကိုယူ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီများသည်နေဆဲမူးယစ်ဆေးဝါးဖြည့်စွက်ရောင်းချခြင်းကိုရည်မှတ်ခြင်းမရှိထိခိုက်မှုရှိကွောငျးကိုအခိုင်အမာပြောဆိုပါတယ်။ တဦးတည်းစုံစမ်းစစ်ဆေး DMAA အမှန် Geranium စက်ရုံတစ်ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်ဤ FDA ကအားဖြင့်ဆန့်ကျင်ခဲ့လြှော့။
သို့သော်အေဂျင်စီမူးယစ်ဆေးသူတွေဟာရယူခဲ့သည်၎င်း၏တောင်းဆိုချက်များ back မှမဆိုထောက်ပံ့သက်သေအထောက်အထားကိုမပေးခဲ့ပါဘူး။ အဆိုပါဖြည့်စွက်အသုံးပြုခြင်း၏ unsafety များ၏တောင်းဆိုမှုများစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတစ်ဦးဆရာဝန်၏အဆိုအရမျှဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုမှန်ကန်စွာဖြည့်စွက်ရာတွင်အသုံးပြုသူတစ်ဦးကပုံမှန်ကျန်းမာတဲ့လူတစ်ဦးအတွက်မျှော်မှန်းထားမည်ဖြစ်သည်။ ဆေးဘက် pre-ယလေ့ကျင့်ခန်းဖြည့်စွက်မှာတွေ့ရှိ DMAA ပမာဏကိုလမ်းလူ့အသုံးပြုမှုအတွက်အဆိပ်ဖြစ်စဉ်းစားသည်အဘယ်အရာကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောခဲ့ကြောင်းစောဒကတက်ခဲ့ကြသည်။
အခြားအာကာသယာဉ်များတွင်ပါတီများစဉ်အတွင်းလှုံ့ဆော်အဖြစ် DMAA သုံးပြီးသူလူငယ်များဘုံရောဂါ, ဦးနှောက်လေဖြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤသည်ကိုထပ်မံဖြည့်စွက်အတွက် DMAA သုံးပြီးများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုရည်မှတ် FDA ကရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုခိုင်ခံ့စေ၏။ ဒါကြောင့်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်လူငယ်များမူးယစ်ဆေးတစ်ခုအလွန်မြင့်မားသောသောက်သုံးသောကိုအသုံးပြုခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက်သို့သော်အခြားစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအပိုင်းပိုင်း FDA ကရဲ့ supporting သက်သေအထောက်အထားဖျက်စီးရမဲ့။
ဒါဟာသူတို့တစ်ဦးချင်းစီတက်ကြွစွာပစ္စည်းဥစ္စာ၏ 600mg န်းကျင်ပါရှိသောကြောင့်ဆေးပြားကိုယူကြောင်းထင်ရှားခဲ့သည်။ ဒါကသာမန်ဇာတ်လမ်းထဲမှာရှိသကဲ့သို့အတော်လေးမြင့်မားသော, အပါဆုံးမျှော်လင့်ထားသည့်ငွေပမာဏကိုတဦးတည်းဖြည့်စွက်ဆေးလုံးအတွက် 60mg န်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤလူငယ်များကိုသူတို့ယူထင်ခဲ့ကြရာ၏ဆယ်ဆကိုလောင်ဆိုလိုသည်။
လုံခြုံ Pre-ယလေ့ကျင့်ခန်းမူးယစ်ဆေးမူးယစ်ဆေး၏သင့်လျော်သောဆေးများကိုယူကြသည်ပေးအဖြစ်မ့်မှုတွေကြုံတွေ့ရမှာတော့အမြင်တစ်ခုသိပ္ပံနည်းကျအချက် မှစ. , မူးယစ်ဆေးထည့်သွင်းစဉ်းစားစေနိုင်ပါသည်။ DMAA 75mg ထက်ပိုမိုမြင့်မားများ၏ဆေးညွှန်းထဲမှာခေါ်ဆောင်သွားသည်ဆိုပါကထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ကြောင်း, အရှင်မလိုချင်တဲ့အဆင့်ဆင့်သွေးဖိအားမြင့်၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုနှင့်လည်းရှိပါသေးတယ်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးသာယင်း၏အသုံးပြုမှုအခြေအနေကပိုဆိုးလာနိုင်ပါတယ်အဖြစ်အတိတ်တွင်မြင့်မားသောသွေးဖိအားမရှိသမိုင်းခဲ့ကြသူတစ်ဦးချင်းစီကအသုံးပြုရပါမည်။
FDA ကမူးယစ်ဆေးထုတ်လုပ်နေကြသူအများအပြားကုမ္ပဏီများကအတည်မပြုထားပြီးဖြစ်သော်လည်းဒါ့အပြင်သူတို့ DMAA အသုံးပြုမှုများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးအချက်ရှိသည်။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုများစီရင်ချက်ကိုပယ်နှင့်မှောင်ခိုစျေးကွက်ကနေဖြည့်စွက် purchasing ဆက်လက်ထို့ကြောင့်အကြံပြုလိုတယ်မဟုတ်ပါဘူး။ DMAA Pre-ယလေ့ကျင့်ခန်းအမှုန့်ရဲ့အသုံးမပြုခင်ဆရာဝန်တစ်ဦးနှင့်အတူဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရအရေးကြီးသောဖြစ်ကြသည်။
ဒါဟာတပ်မက်လိုချင်သောရလဒ်များအသုံးပြုသူရဲ့ကျန်းမာရေးဘေးကင်းလုံခြုံမှု bleaching မပါဘဲအောင်မြင်ဖြစ်ကြောင်းသေချာပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျ DMAA ဖြည့်စွက်ယူမီကိုသိရန်အဘယ်အရာလိုအပ်သလဲ?
မည်သည့်စွမ်းဆောင်ရည်များကိုလည်းတိုးတက်စေနိုင်အားကစားသမားရွေးချယ်မှု pre-ယလေ့ကျင့်ခန်းမူးယစ်ဆေးအဖြစ် DMAA အပေါ်နှိမ့်ချဖြေရှင်းမတိုင်မီနှင့်အတူဝေါဟာရများထံသို့လာသင့်ကြောင်းမြောက်မြားစွာအချက်အလက်များရှိပါတယ်။ ဤအမှုအရာတို့ကိုအချို့သည်တဦးတည်းသင်က၎င်း၏အသုံးပြုမှုအနေဖြင့်အသီးအနှံကိုရိတ်ရကြလိမ့်မည်အကျိုးကျေးဇူးများသကဲ့သို့ကောင်းစွာကြုံတွေ့ရဖွယ်ရှိသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများပါဝင်သည်။
သငျသညျကိုသိရန်လိုအပ်သောအရာတို့ကိုအကြားမူလတန်းဒီမူးယစ်ဆေးသုံးပြီးများ၏သက်ရောက်မှုကိုကင်းနှင့်စိတ်ကြွဆေးများအသုံးပြုမှုပြီးနောက်ကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်အရာကိုအလားတူဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ကအာဏာအရှိဆုံးလူသိများစိတ်ကြွဆေးအကြားထိပ်ပိုင်းအဆင့်အဖြစ်စွဲဖွံ့ဖြိုးဆဲ၏ဖြစ်နိုင်ခြေအလွန်မြင့်မားကြောင်းဆိုလိုသည်။ သင်သည်သင်၏လေ့ကျင့်ခန်းတိုးတက်လာဖို့ကွိုးစားအဖြစ်သင်အင်အားအကောင်းဆုံးစှဲတသင့်ခန္ဓာကိုယ်ထမဖွင့်စေခြင်းငှါသတိပြုမိဖြစ်သင့်သည်။
စွဲလမ်း၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုရှောင်ရှားရန်, သင်တင်းကြပ်စွာသင့်ဆရာဝန်သင်၏ကျန်းမာရေးများအတွက်အများဆုံးလုံခြုံယုံကြည်နေပါတယ်သောအရာကိုကိုလိုက်နာကြောင်းသေချာစေရန်သင့်ပါတယ်။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေးများအသုံးပြုမှုကိုတိုက်ရိုက်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ် impact သွားကြောင်းသိနားလည်ရန်လည်းအလွန်အရေးကြီးသည်။ DMAA သင့်ခန္ဓာကိုယ်မြင့်မားတပ်လှန့်အောင် CNS ၏ဧည့်ခံမှုနှုန်းလျှော့ချခြင်းဖြင့်ဖိန်းမှအလားတူပြုမူ။
အဆိုပါမူးယစ်ဆေးဖိန်းထက်တန်ခိုးကြီးနှင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်သင်တစ်ဦးမြင့်မားသောမှတ်စုပေါ်တွင်သင်၏လေ့ကျင့်ခန်း session တစ်ခုစတင်ဖို့ရန်လိုအပ်သည့်စွမ်းအင်ကိုစမ်းငါပေးမည်။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေးတိုက်ရိုက်အများဆုံးထိခိုက်မခံတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများ၏တဦးတည်းသြဇာလွှမ်းမိုးသကဲ့သို့သင်တို့လောင်သောသောက်သုံးသောအပေါ်စစ်ဆေးထို့ကြောင့်နောက်တဖန်အရေးပါသည်။ 2012 အစီရင်ခံတဲ့အမှုမှာတော့လူငယျတစုပါတီ session တစ်ခုအတွင်းမူးယစ်ဆေးသုံးခဲ့ရကြောင်းသိရှိရသည်။
သူတို့ကတစ်ဦးတည်းအချိန်သောက်သုံးသောများအတွက်လိုအပ်သောသည်အဘယ်အရာထက်ဆယ်ဆပိုပြီးလောင်လေ၏။ အဆိုပါရည်ရွယ်ချက်ကိုလျှင်မြန်စွာ '' မြင့်သော '' အရခဲ့တယ်, ဤသူတို့၏ပျက်စီးစေခြင်းငှါလှည့်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေး၎င်းတို့၏ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်ထိခိုက်နှင့်အများဆုံး Terminal ကိုနာမကျန်းဖြစ်သောတစ်ဦးနှောက်လေဖြတ်ရှိသည်ဖို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။
အသုံးပြုသူများကိုလည်းနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ဆံ့ကြောင်းများစွာသောအခြား Pre-ယလေ့ကျင့်ခန်းဖြည့်စွက်မတူဘဲ DMAA သွေးပြန်ကြောများ၏ vasoconstriction ဖြစ်ပေါ်စေသည်ကိုနားလည်သင့်၏။ ဤသည် DMAA ဆေးပြားယူခဲ့သူတစ်ဦးချင်းမဟုတ်သူအခြားထက်သွေးကြောကျုံ့ကြလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ ကရောဂါ၏ပြင်းထန်မှုတိုးချဲ့ဖို့ဖွယ်ရှိသည်အဖြစ်မြင့်မားတဲ့သွေးဖိအားများ၏ပြဿနာတစ်ခုရှိပါတယ်သူတစ်ဦးမှဖြစ်ပျက်လျှင်ဤအခြေအနေသည်ဆိုးဝါးစေနိုင်ပါတယ်။
ထို့ကြောင့်, မြင့်မားတဲ့သွေးဖိအားကနေကြုံတွေ့နေကြရသည်တဲ့သူတစ်ဦးချင်း DMAA အသုံးပြုခြင်းမှရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။
မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အသုံးပြုမှုတိုးမြှင့်သွေးစီးဆင်းမှုနှင့်မြင့်မားသောစွမ်းအင်ကိုတစ်ဦးခံစားချက်ဖြစ်ပေါ်စေဖွယ်ရှိသည်။ ဒီကသင်၏ခန္ဓာကိုယ်သင်ဖြစ်နိုင်သည်မကိုင်တွယ်နိုင်သောဧရာမစွမ်းအင်ရှိသည်ဖြစ်စေနိုင်သည်ကဲ့သို့သောအခြားစွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူဖြည့်စွက်နားဆက်မှီရာတွင်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာ DMAA အဓိကအားအခြားမည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုမဖြစ်သင့်တဲ့ Pre-ယလေ့ကျင့်ခန်းဖြည့်စွက်ကြောင်းကိုနားလည်ရန်အကြံပြုလိုတယ်။
DMAA ကြိုတင်လေ့ကျင့်ခန်း နှင့်ကြိုတင်လေ့ကျင့်ခန်းဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ
DMAA ၏စားသုံးမှုပြီးနောက်, လူအခြို့ပျို့ခြင်းနှင့်အန်အပါအဝင်ကြိုတင်လေ့ကျင့်ခန်းဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကြုံတွေ့ကြသည်။ ဒါကပုံမှန်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ကောင်းမူးယစ်ဆေးများကိုအဆိုးတုံ့ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုသည်။ သို့သော်အန်ခြင်းနှင့်ပျို့ချင်သေချာပေါက်တိုက်ရိုက် DMAA အသုံးပြုမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့မည်မဟုတ်ပါ။ အဆိုပါဓာတုသည်အခြားမဲဆန္ဒနယ်မှရှိသည်သောဖြည့်စွက်တွင်ပါရှိသောတာဖြစ်ပါတယ်, သူတို့လည်းအန်၏အကြောင်းတရားများရှိနိုင်ပါသည်။
အပြင်အခြား Pre-ယလေ့ကျင့်ခန်းသက်ရောက်မှုထိုကဲ့သို့သော DMAA အဖြစ်စိတ်ကြွဆေးများအသုံးပြုမှုနှင့်အတူဘုံဖြစ်ကြသည်။ ထိုသို့သောပါဝင်သည်:
အတော်များများဖြည့်စွက်အသုံးပြုခြင်းမှကင်းလွတ်ခွင့်ရနေသောလူများ၏ခွဲခြားမှုနှင့်အတူ လာ. , သူတို့တွင် key ကိုနို့တိုက်မိခင်များအဖြစ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေသောသူတို့ကိုပါဝင်သည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲမှုမွေးသေးသောကလေး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဖို့အလွန်အမင်းဖွယ်ရှိသည်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနောက်ကွယ်ကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ အများကြီးသတင်းအချက်အလက်လူများ၏ခွဲခြားအုပ်စုများဖို့အများကြီးဖြည့်စွက်၏အသုံးပြုမှုကိုရည်မှတ်ရရှိနိုင်ပေမယ့်သို့သော်ငြားလည်း, ဤ DMAA Pre-ယလေ့ကျင့်ခန်းမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူအမှုမဟုတ်ပါဘူး။
ဒီနှင့် ပတ်သက်. အလွန် scanty သတင်းအချက်အလက်ရှိပါတယ်တည်ရှိ။ မျှော်မှန်းဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့် ပတ်သက်. အနည်းငယ်သာသတင်းအချက်အလက်ရှိပါတယ်အဖြစ်ထိုကွောငျ့, တစ်ဦး Pre-ယလေ့ကျင့်ခန်းမူးယစ်ဆေးအဖြစ် DMAA သုံးစွဲဖို့ရည်ရွယ်ခြင်းနှင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်သို့မဟုတ်နို့တိုက်ဖြစ်စေနေသောသူတို့ကိုနိုင်အောင်လုပ်နေတာမှရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။ ဒါကလုံခြုံချဉ်းကပ်မှုထက်သူတို့စဉ်းစားဘယ်တော့မှကြောင့်ဆိုးကျိုးများမှအသုံးပြုသူ predisposing ဖြစ်လိမ့်မည်။
DMAA မူးယစ်နေတဲ့လှုံ့ဆော်အဖြစ်ခွဲခြားထားပါသည်။ ဤသည်ကပဲစစ်ဆင်ရေးမတိုင်မီယူတတ်၏အထူးသဖြင့်လာသောအခါသြဇာလွှမ်းမိုးမှုလုံခြုံခွဲစိတ်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေ adversely ဖွယ်ရှိကြောင်းဆိုလိုသည်။ ထို့ကြောင့်ဤကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးကိုရှောင်ရှားရန်, သင်တစ်ခွဲစိတ်စစ်ဆင်ရေးများအတွက်သတ်မှတ်ထားကြသည်လျှင်အသုံးပြုခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ဖို့အကြံပြုလိုတယ်။
ဤသည် DMAA ကိုသုံးပါသောသူတို့နှငျ့အတူပြောရလျှင်ကြောင်းအရှိဆုံးသိသာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပါသည်။ မူးယစ်ဆေးတစ်ခုလှုံ့ဆော်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်ဤလူတန်းစားအများစုမူးယစ်ဆေးအထူးသဖြင့်လာသောအခါနှိပ်စက်မြင့်မားတဲ့သွေးဖိအားသွေးဆောင်သိနေကြသည်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ DMAA သွေးကြောများ၏ကျဉ်းစေပါတယ်, ဤအသှေးကိုမြင့်မားတဲ့သွေးဖိအားပုံမှန် Results ထက်လျင်မြန်သောနှုန်းဖြင့်စီးကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ကြောင့်ဒီဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရန်, DMAA ၏အသုံးပြုမှုကိုထိုကဲ့သို့သောနှောက်လေဖြတ်ကဲ့သို့သောအခြားဆိုးရွားသောရောဂါဖြစ်ပေါ်စေတွေ့ရှိထားသည်။ ဒီလက္ခဏာ၏ဖြစ်ရပ်မှာတော့အသုံးပြုသူကိုချက်ချင်းမူးယစ်ဆေးသုံးပြီးမှရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။ ယင်း၏ဆက်လက်သုံးစွဲခြင်းလက္ခဏာများအရှိန်မြင့်လာဖွယ်ရှိကြောင်းနှင့်လည်းအသေခံဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လောက်ကြာ DMAA သင့် system နေသလဲ,
DMAA ၏အုပ်ချုပ်ရေးအသုံးအများဆုံးလမ်းကြောင်းပါးစပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤနည်းအားယူသောအခါ, မူးယစ်ဆေးစားသုံးသူရဲ့သွေးကြောထဲသို့ရရှိရန်နှင့် ပတ်သက်. ရှစ်မိနစ်ကြာလိမ့်မည်။ သို့သော်သက်ရောက်မှုအရှိဆုံးမူးယစ်ဆေးတစ်နှစ်ခွဲ-ဘဝကာလလို့ခေါ်ပါတယ်အဘယျသို့ရှိချက်ချင်းအဖြစ်ခံစားခဲ့ရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဤသည်ကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့၎င်း၏တက်ကြွပါဝင်ပစ္စည်းများပြိုကွဲခြင်းနှင့်ဖြန့်ချိဖို့မူးယစ်ဆေးဝါးလိုအပ်သောအချိန်ဖြစ်ပါသည်။
DMAA ၏ဝက်ဘဝအကြောင်းကို 8 နာရီဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့စုပ်ယူခံရဖို့မူးယစ်ဆေးများအတွက်လုံလောက်သောအချိန်ပေးစေခြင်းငှါရှေ့တော်၌ထိုကွောငျ့, တစ်ဦးယလေ့ကျင့်ခန်း session ကိုရှေ့တော်၌မိမိ / သူမ၏ခန္ဓာကိုယ်မြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတစ်ဦးချင်းမူးယစ်ဆေး 8 နာရီကိုယူသင့်ပါတယ်။
မူးယစ်ဆေးဝါးအသုံးပြုမှုပြီးနောက်မြင့်မားသောဖြစ်ခြင်း၏အထွေထွေခံစားမှုတွေ့ကြုံဖြစ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့်, ဒီလူအများစုသူတို့အထဲကအလုပ်လုပ်ကြသည်မဟုတ်, အထူးသဖြင့်အချိန်အားဖြင့်ခပ်သိမ်းသောတွေ့ကြုံခံစားချင်ပါတယ်တဲ့ခံစားချက်မဟုတ်ပါဘူး။ စားသုံးမှုပြီးနောက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေထုတ်ပယ်ခံရဖို့မူးယစ်ဆေးများကခေါ်ဆောင်သွားသည်ကိုဘယျအခြိနျသိရန်လိုအပ်ကြောင်း, ဒါကြောင့်, ရှိပါတယ်။
ပျှမ်းမျှတွင်မူးယစ်ဆေးခံစားခကျြမရှိတော့ကြုံတွေ့နေသောပြီးနောက်အကြောင်း 24 နာရီနေ့အဘို့ကိုယ်ခန္ဓာ၌ထိန်းသိမ်းထားသည်။
အဆီမီးရှို့ခံရသောအဘို့ DMAA ၏အကျိုးကျေးဇူးများ
ဖြစ်နိုင်သည်ကိုသင်ကိုယ်အလေးချိန်အတွက် DMAA များ၏စွမ်းရည်နှင့် ပတ်သက်. မြောက်မြားစွာဒဏ္ဍာရီများနှင့်ဖြစ်ရပ်မှန်များစကားကိုသင်တို့ကြားရပြီနှငျ့သငျသဘာဝကျပါတယ်သူတို့ထဲကအရာကိုသိရန်ချင်ပါတယ်။ ကောင်းပြီ, ဒီကိစ္စကို၏တကယ်တော့ DMAA ဖြည့်စွက်သင်သည်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းတွေနဲ့အလေးချိန်သိသိသာသာငွေပမာဏကိုသွန်းကိုကူညီနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ပထမဦးစွာတစ်ဦး Dimethylamylamine ဖြည့်စွက်သင်သည်နာကျင်မှုနှင့်စွမ်းအင်ရန်သင့်သည်းခံစိတ်တိုးပွားလာ၏အတိုင်းအတာအထိအာရုံနှင့်တွန်းအားတိုးလာကြပါပြီကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါတိုးမြှင့်စွမ်းအင်နှင့်နာကျင်မှုသည်းခံသင်အောင်မြင်စွာတိကျခိုင်မာစွာကိုယ်အလေးချိန်လေ့ကျင့်ရေးကိုခံယူဖို့ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အဆီများ၏မီးလောင်ရာမှကြွလာသောအခါ, 13Dimethylamylamine အထင်ရှားဆုံး thermogenic အဆီ burners တွေကတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရုံဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့အဆီလောင်ကျွမ်းမှုကိုဖြည့်စွက်၏အများစုလိုပဲ DMAA အဆီမီးလောင်ရာပေါ်ပေါက်ဖို့အလွန်အမင်းမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်မထွက်ရတစ်ဦးအမှု၌အပေါ်ပိုမိုမြန်ဆန်ခါတိုင်းထက်အဆီများစွာမီးလောင်ရာအစပျိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
သငျသညျကိုအံ့ဩနေကြတယ် dmaa ဘာလုပ်သလဲ သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအဆီကိုမီးမရှို့ဖို့?
ကောင်းပြီ, DMAA, vasoconstriction အားဖြင့်သင်တို့၏အသွေးစီးဆင်းမှု၏ကန့်သတ်ကပါဝင်ပတ်သက်သည့်ဖြစ်စဉ်ကိုသင့်ရဲ့စွမ်းအင်ကိုမြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။ ကန့်သတ်သွေးစီးဆင်းမှုကြွက်သားကြီးထွားအဖြစ်ကြွက်သားဆွဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထိုကဲ့သို့သော, သင့်ဇီဝြဖစ်နှုန်းကိုတိုးမြှင့်အဖြစ်မှာတော့ခန္ဓာကိုယ်အဆီပိုမြန်ပြီးပိုထိရောက်မီးလောင်ရာမှဦးဆောင်။
DMAA ၏အဆောက်အဦများ, ephedrine နှင့်အမ်ဖီတမင်းတူညီအများကြီးမျှဝေပါ။ ကဲ့သို့သောခုနှစ်, DMAA ဦးနှောက် norepinephrine လွှတ်ပေးရန်ဖြစ်စေတဲ့, လူ့ရဲ့ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်သူကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ alpha နဲ့ beta ကို receptors အကျိုးဆက်သွယ်ဝိုက် adrenergic အဲဒီ receptor system ကိုလှုံ့ဆော်ဖို့, noradrenaline လှုပ်ရှားမှုတိုးလာကြပါပြီမှစေသည်။
နှစ်ဦးစလုံးအရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကိုတစ်ဦးကပေါင်းစပ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရန်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်နှုန်းမှာတစ်ဦးတိုးအဖြစ် adipose တစ်ရှူးများထံမှကောင်ဆီဥကိုပျက်ပြားစေပါတယ် - ဤလုပ်ငန်းစဉ် lipolysis ဟုခေါ်သည်။
ကဖိန်းဓာတ်ကဲ့သို့အခြားလှုံ့ဆော်ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူအသုံးပြုသည်ဆိုပါက DMAA ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသိသိသာသာတိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။
ဆီဥထက်ပို 35% အားဖြင့်ထိရောက်မှုတိုးကိုမီးရှို့နေစဉ်အတွင်း 169% အသုံးပြုပုံအတူတကွဖိန်းဓာတ်နှင့်အတူဇီဝဖြစ်စဉ်နှုန်းကိုတိုးမြှင့်အပေါ် DMAA ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအသုံးပြုပါ။
အဆီမီးလောင်ရာအတွက် DMAA ၏ထိရောက်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ကောက်ယူလတ်တလောလေ့လာမှုမှာတော့ 32 နေ့ရက်ကာလအဘို့နေ့စဉ်၎င်း၏ဖြည့်စွက်များထဲမှဆေးတောင့်မျိုချမိခဲ့သော 14 ကျန်းမာလူကြီးများသိသိသာသာအဆီဆုံးရှုံးမှုကြုံတွေ့။
ကိုယ့်ကိုအခြားမူးယစ်ဆေးလိုပဲ DMAA စော်ကားလျှင်အချို့သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိသည်ဖို့ဖွယ်ရှိသည်။ ဤတွင်ဖြစ်နိုင်ချေတချို့ရှိနေပါတယ် DMAA ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ:
1. ဦးနှောက် haemorrhage
ဦးနှောက် haemorrhage တိုက်ရိုက် DMAA ချိတ်ဆက်မျှသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်ပေမယ့်လည်းတစ်ဦးအစွမ်းထက်အရက်နှင့် DMAA ရောနှောယူပြီးပြီးနောက်အခြေအနေကိုတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးတဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏တစ်ဦးကဖော်ပြခဲ့သည်ကိစ္စတွင်ရှိပါတယ်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့မဟုတ်ရင်ထိုကဲ့သို့သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမနိုင်ဖွယ်ရှိသည် DMAA အရက်အတူမသုံးသင့်ကြောင်းသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်။
အသည်း၏အဓိက function ကိုကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အခြားအစိတ်အပိုင်းများမှသွားခွင့်ပြုမပြုမီအစာခြေကျေးရွာအုပ်စုရဲ့သွေး filter ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အပြင်အသည်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ metabolizes နှင့်လည်းဓာတုပစ္စည်း decontaminates ။
သငျသညျ DMAA ဆေးလုံးသို့မဟုတ်ဖြည့်စွက်ယူသောအခါ, အသည်းမူးယစ်ဆေး / ဖြည့်စွက်၏ပစ္စည်းနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ရှိပါတယ်။ ရလဒ်အဖြစ်အသည်းအဆိပ်ဖြစ်ခြင်းတက်အဆုံးသတ်နိုင်သည့်တစ်ဦးအင်ဇိုင်းတည်ဆောက်-up, တွေ့ကြုံခံစားပေလိမ့်မည်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးလည်းအချိန်နှင့်အတူအမြဲတမ်းအသည်းပျက်စီးမှုသို့မဟုတ်အမာရွတ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်အသည်းရောင်ခြင်းဖြစ်ပေါ်စေပေလိမ့်မည်။
ကလှုံ့ဆော်ကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစား, Dimethylamylamine သွေးဖိအားတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။ ကဲ့သို့သောခုနှစ်, သွေးတိုးခံစားနေရပြီးလူများက်မူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်ဖြည့်စွက်တာကိုရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။
4. မမှန်နှလုံးခုန် (နှလုံးပုံမမှန်ခြင်း),
ခဲသော်လည်း, DMAA ၏လှုံ့ဆော်အကျိုးသက်ရောက်မှုဟာလျင်မြန်စွာနှလုံးခုန်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မယ်, ဒီအခွအေနေခံစားနေရပြီးလူများအတွက်နှလုံးပုံမမှန်ခြင်းပိုဆိုးလာလိမ့်မယ်။ ထိုကွောငျ့, သငျသညျခွဲစိတ်ဘို့စီစဉ်ထားကြသည်အမှု၌, သင်မူးယစ်ဆေး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်တိုးလာမြင့်မားတဲ့သွေးဖိအားများနှင့်မမှန်နှလုံးခုန်ခွဲစိတ်ခန်းသုံးခွဲစိတ်နှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်မယ်, မဟုတ်ရင်, နှစ်ပတ်အတွင်းစစ်ဆင်ရေးနေ့စွဲမတိုင်မီ DMAA ယူပြီးဆန့်ကျင်ရန်အကြံပြုပါသည်။
DMAA များ၏သက်ရောက်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ပြုလေ့လာမှုတစ်ခုမှာတော့တွေ့ရှိချက် OxyELITE Pro ကိုနှစျယောကျတောင့ကျွမ်းလောင်ခဲ့သောအသီးအသီးအဘယ်သူကို၏ 12 ကျန်းမာလူကြီးများညွှန်ပြ, Dimethylamylamine င်တစ်ဦးဓါတ်ဖြည့်စွက်တစ်ခုတိုးလာနှလုံးခုန်နှုန်းအဖြစ်ကြီးပြင်းသွေးဖိအားရှိခဲ့ပါတယ်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေ DMAA တစ် 25 မီလီဂရမ်ထိုးယူတဲ့သူရှစ်ကျန်းမာလူကြီးများပင်မူးယစ်ဆေးယူပြီးပြီးနောက်ပုံမှန်နှလုံးခုန်နှုန်းနှင့်သွေးဖိအားရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤသည်ထိုကဲ့သို့သောထိုးများတွင်စားသုံးလျှင်မူးယစ်ဆေးနှလုံးခုန်နှုန်းသို့မဟုတ်သွေးဖိအားအပေါ်တစ်စုံတစ်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်မဟုတ်ပါဘူးအရိပ်အယောင်၌တည်၏။
လှုံ့ဆော်သက်ရောက်မှုရှိခြင်းအပြင် Dimethylamylamine လည်းသွေးကြောများကျပ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ နှစ်ခုသက်ရောက်မှုများ၏ပေါင်းစပ်ရေတိမ်အချို့အမျိုးအစားများတင်းမာမှုလျှော့ချဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်သင်ကရေတိမ်ရှိပါကသင်မူးယစ်တာကိုရှောင်ကြဉ်ကြောင်းအကြံပြုလိုတယ်။
အဲဒီမှာလည်း DMAA စားသုံးမှု၏ရလဒ်အဖြစ်အသည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနှင့် ပတ်သက်. ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ကြသည်။ လွန်ခဲ့တဲ့ငါးနှစ်ကတစ်ဦးပါဝင်ပစ္စည်းအဖြစ် DMAA နှင့်အတူ Pro ကိုတစ်ဦးဓါတ်ဖြည့်စွက် OxyELITE ယူခဲ့သော 36 လူများ, အသည်းပျက်စီးမှုနှင့်အတူရောဂါခဲ့ကြသည်။ အခြားနှစ်ယောက်တစ်ဦးအသည်းအစားထိုးကုသမှုအပြီးဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ဖို့စီမံခန့်ခွဲနေစဉ်လူနာတစ်ဦးကသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာအပေါငျးတို့သ 36 လူနာဖြည့်စွက်၏အကြံပြုထိုးတာခံခဲ့ရပေမယ့်သူတို့ထဲက 27 အဆိုပါဖြည့်စွက်တဲ့ DMAA-အခမဲ့ဗားရှင်းယူပြီးခဲ့ကြသည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ကျိုးနပ်သည်။ သို့အတွက်ကြောင့်ဖြည့်စွက်အတွက်အဆိပ်ဒြပ်ပေါင်းတည်ထောင်ရန်လွယ်ကူသည်မဟုတ်။
DMAA များအသုံးပြုမှုတွင်လည်းဦးနှောက်သွေးထွက်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ တကယ်တော့, DMAA သုံးပြီးပြီးနောက်ဦးနှောက်သွေးထွက်ခဲ့တယ်သူတွေကိုသုံးခုဖြစ်ပွားမှုအစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ကြသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေထိုသို့သားကောင်များအရက်သို့မဟုတ်မှန်မှန်ဖိန်းဓာတ်နှင့်အတူမူးယစ်ဆေးအသုံးပြုခဲ့ဖူးကြောင်းထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါအမှုများထဲကတစ်ခုမှာတော့ကျန်းမာတဲ့လူတစ်ဦး Dimethylamylamine င်တစ်ဦးဓါတ်ဖြည့်စွက်၏အကြံပြုထိုး ယူ. သောနောက်, သူကဦးနှောက်သွေးထွက်ခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်လေးနက်ခေါင်းကိုက်တွေ့ကြုံခံစားဖို့စတင်ခဲ့တယ်။
, Jack22d သုံးပြီးပြီးနောက်သုံးပတ်ကဖိန်းဓာတ်နှင့်အတူ DMAA င်တစ်ဦးဓါတ်ဖြည့်စွက်တဲ့နှလုံးတိုက်ခိုက်မှုဖွံ့ဖြိုးပြီးသူတစ်ဦးကျန်းမာ3နှစ်အရွယ်လူသား၏အစီရင်ခံကိစ္စတွင်ရှိပါသည်။
DMAA ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုပြန်လည်သုံးသပ်လေ့လာမှုတစ်ခုမူးယစ်ဆေးပါရှိသောအရာဖြည့်စွက် (OxyElite Pro ကို) ယူခဲ့သော 15 လူများ 56% အန်ခြင်းနှင့်ဖြည့်စွက်တာအပြီးပျို့ချင်ကြုံတွေ့ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ သို့သျောလညျးအဘယ်သူမျှမသက်သေအထောက်အထားများကပျို့ခြင်းနှင့်အန်သို့မဟုတ်အခြားပါဝင်ပစ္စည်းများတာဝန်ယူခဲ့ကြသည်စေသောအရာဖြည့်စွက်အတွက် DMAA င်လျှင်ပြသရှိ၏။
10 ။ ယာယီအားနည်းခြင်း
DMAA ၏အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်အသုံးအများဆုံးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမူးယစ်ဆေးယူပြီးပြီးနောက်အကြမ်းဖျင်းနာရီအနည်းငယ်များအတွက်စွမ်းအင် ( 'လေယာဉ်ပျက်ကျမှု') ၏ထင်ရှားဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လူတိုင်းမဒီဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမူးယစ်ဆေးအတွေ့အကြုံများကိုအသုံးပြုတဲ့သူ။
သူများသည် DMAA ၏ဖြစ်နိုင်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတချို့ရှိနေပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာသီးသန့်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမလေ့လာမှုများရှိပါသည်။ မူးယစ်ဆေးရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့လာမှုအများစုကသူတို့ပါဝင်ပစ္စည်းများများထဲမှအစားအထီးကျန်အတွက်မူးယစ်ဆေးအဖြစ် DMAA နှင့်အတူဓါတ်ဖြည့်စွက်ပါဝငျသညျ။ အဆိုပါဖြည့်စွက်အတွက်မူးယစ်ဆေးများအတိအကျသောက်သုံးသောထူထောင်မဟုတ်ကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း, ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး DMAA ၏ရလဒ်အဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းနိဂုံးချုပ်မတိကျမှန်ကန်မှုရှိပါတယ်။ အဆိုပါဖြည့်စွက်အခြားပါဝင်ပစ္စည်းများသည့်ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများများ၏အကြောင်းရင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အပြင်အချို့သောဖြစ်ရပ်အတွက်ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများ DMAA-based ထုတ်ကုန်သုံးရင်၏ရလဒ်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။ ဤအဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကြုံတွေ့ခဲ့ကြသူအသုံးပြုသူအချို့က 1,000 နေ့စဉ် mg အထိယူကြပြီသတင်းပို့ခဲ့ကြသည်။ တဦးတည်းမှန်ကန်သောပုံမှန်သောက်သုံးသောကပ်လျက်ပါလျှင်ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်မှာသက်ရောက်မှုကိုရှောင်ရှားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ကခဏအတွင်းညာဘက် DMAA သောက်သုံးသောအကြောင်းပြောဆိုကြလိမ့်မည်။
CNS စိတ်ကြွဆေးဒါမှမဟုတ် adrenergic စနစ်များကိုထိခိုက်စေသော nootropics နဲ့တွဲသုံးလျှင်အပြင် 1,3Dimethylamylamine ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အပေါ်အလွန်ပြင်းထန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာအမျိုးမျိုးသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမှဖြစ်ပေါ်စေမည်။ သင်သက်ရောက်မှုကိုရှောင်ရှားလိုလျှင်ထိုအကြောင်းကြောင့်, သင်စိတ်ကြွဆေးတစ်ခုသို့မဟုတ် nootropic နှင့်အတူ DMAA ပေါင်းစပ်ကြဘူးဆိုတာသေချာ။
ဒါ့အပြင်သူက DMAA ဖြည့်စွက်နေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာအသုံးမပြုသင့်ကြောင်းအကြံပြုသည်။ ဒါကြောင့်မှန်ကန်တဲ့ Dimethylamylamine သောက်သုံးသောကဘာလဲ?
လက်ျာ dimethylamylamine ထိုးအသက်နှင့်အခြားအခြေအနေများတို့တွင်အသုံးပြုသူရဲ့ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်းကဲ့သို့အမျိုးမျိုးသောအချက်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သို့သော်လက်ရှိတွင်အဆိုပါမူးယစ်ဆေး၏ညာဘက်သောက်သုံးသောတည်ထောင်ရန်အပေါ်မှီခိုရနိုင်မလုံလောက်သောသိပ္ပံနည်းကျသတင်းအချက်အလက်များလည်းမရှိ။
အမှု၌သင်တို့ကိုသင်ဖတ်နှင့်နောက်တော်သို့လိုက်သည်၎င်း၏တံဆိပ်ပေါ်တွင်အသုံးပြုမှုညွှန်ကြားချက်ကြောင့်အသုံးမပြုမီသင်၏ဆရာဝန်, ဆေးဝါးသို့မဟုတ်အခြားဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြောင်းသေချာစေရန်အဆီ / ကိုယ်အလေးချိန်များအတွက် DMAA ထုတ်ကုန်ဝယ်ပါပြီ။
ပုံမှန်အားဖြင့် DMAA ၏စတင်ထိုး 10 20mg မှ MG ကနေနေကြပါတယ်။ သို့မဟုတ်သင့်ရွေးချယ်မှု၏ DMAA-အားလုံးပါဝင်နိုင်ထုတ်ကုန်၏အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်နေတဲ့½။ ဤသည်ကိုကြည့်ပါနှင့်မူးယစ်ဆေးကိုသင်အပြည့်အဝထိုး၌ယူလျှင်သင်ကိုထိခိုက်ဖွယ်ရှိသည်မည်မျှခံစားရရန်သင့်အားကူညီပေးပါမည်။
အချိန်အားဖြင့်တတ်သကဲ့သို့, သငျသညျ 40 သို့မဟုတ် 60 တစ်နေ့လျှင် mg မှဆေးထိုးတိုးမြှင့်ပေလိမ့်မည်။ သို့သော်ဆေးထိုးပ္ပံ supporting အဘယ်သူမျှမလိုက်ဖို့သက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်။
သူတို့ဟာထင်ရသော dimethylamylamine ်ထုတ်ကုန်များအတွက်စံဆေးညွှန်းဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါတန်ဖိုးများကိုလက်ရှိစျေးကွက်အပေါ် DMAA ဖြည့်စွက်၏ထုတ်လုပ်သူများကပေးသောအသုံးပြုမှုအကြံပြုချက်များကနေရလဒ်။
သင်ကအကောင်းဆုံးရလဒ်တွေကိုအောင်မြင်ရန်ချင်လျှင်သင်နေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာတစ် DMAA ထုတ်ကုန်ကိုမသုံးသင့်ပါတယ်။ DMAA ဖြည့်စွက်၏အများစုအရှိဆုံးမှာသူတို့ကိုတစ်ပတ်ကိုနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်စားသုံးကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအကြိမ်ရေအတွက်ဖြည့်စွက်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်အလွယ်တကူထုတ်ကုန်အပေါ်တစ်ဦးမှီခိုဖွံ့ဖြိုးဆဲရှောင်ရှားရန်စီမံခန့်ခွဲ။
သငျသညျစွမ်းအင်လိုအပ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းအတွက်ပါဝငျမတိုင်မီထပ်တိုးသို့မဟုတ်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 30 မိနစ်အာရုံစူးစိုက်လာသောအခါဖြစ်နိုင်ရင်, အ DMAA ဆေးပြားကိုအသုံးပြုပါ။ အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်, အချို့ကိုသင်ရှောင်ရှားနိုင်ပါလိမ့်မယ် ကြိုတင်လေ့ကျင့်ခန်းဖြည့်စွက်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ.
ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း4အကောင်းဆုံး-ရောင်းအားအဆီမီးရှို့ခံရသောမူးယစ်ဆေးဝါး
, တဏှာလျှော့ချခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝြဖစ်တိုးပွားလာနှင့် / သို့မဟုတ်ညာဘက်အစာစားချင်စိတ်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့်အဆီဆုံးရှုံးမှုကူညီကြောင်းအမျိုးမျိုးသောမူးယစ်ဆေးဝါးများရှိပါတယ်။ အဆီသူသို့မဟုတ်သူမ၏စွမ်းအင်နှင့်အာရုံစူးစိုက်တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများလည်းတတ်နိုင်သမျှပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့အကျယ်ချဲ့ယလေ့ကျင့်ခန်းအလားအလာလည်းမီးလောင်။
မူးယစ်ဆေးအမည်နှင့် CAS အရေအတွက် ဘယ်လိုလည်ပတ်သော
Synephrine အမှုန့် -CAS: 94-07-5 Synephrine အမှုန့်လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်နှုန်းကယ်လိုရီအသုံးချနှင့်စွမ်းအင်အဆင့်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်လုပ်ဆောင်နေတဲ့ beta ကို-agonist ဖြစ်ပါသည်
1,3-dimethylamylamine (DMAA အမှုန့်) - CAS 13803-74-2 ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု Ephedrine ၏ပုံနဲ့တူတဲ့နှင့်အတူ, 1,3-dimethylamylamine အားကစားစွမ်းဆောင်ရည်၏တိုးတက်မှုအတွက်နှင့်စွမ်းအင်မြှင့်တင်ပေးဘို့ကိုကူညီအာဟာရဖြည့်စွက်အတွက်အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုနေတဲ့ဒြပ်အာရုံကြောလှုံ့ဆော်ဖြစ်ပါတယ်။
Clenbuterol Hydrochloride-CAS 21898-19-1 ပါဝါကိုမီးရှို့သည်ခိုင်ခံ့သောအဆီရှိခြင်းအပြင် Clenbuterol Hydrochloride လည်းသွေးဖိအားတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ခက်အလုပ်မလုပ်ဖို့နှလုံးချက်ချင်းကသိသာ thermogenic အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
အပြင်ကဤအရပ်မှခန္ဓာကိုယ်အဆီလောင်ပြိုကွဲဖို့ glycogen ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
Salbutamol (Albuterol) - CAS 18559-94-9 salbuterol အမှုန့်အစပိုင်းတွင်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါနှင့်အတူလူကအသုံးပြုခဲ့သည်သို့မဟုတ် သူတို့ရဲ့အသက်ရှူတိုးတက်လာဖို့နာတာရှည်အဆုတ်ရောဂါ။ သို့သော်ယနေ့ခေတ်, မူးယစ်ဆေးဝါးအဓိကကြွက်သားတစ်ဦးအဆီဆုံးရှုံးမှုစစ်အစိုးရကာလအတွင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအဖြစ်တဦးတည်းအဆီဆုံးရှုံးမှုလေ့ကျင့်ခန်းဖျော်ဖြေသောအခါခံနိုင်ရည်မြှင့်တင်ရန်အဘို့, လျင်မြန်သောအဆီဆုံးရှုံးမှုမြှင့်တင်ရန်အသုံးပြုသည်။
သငျသညျ dmaa သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုမီးရှို့အထက်ပါအဆီမဆိုဝယ်လို့ချင်လျှင်, သင်ရိုးရှင်းစွာဒီတော့လုပ်ရတဲ့-အခမဲ့ AASraw, com ကနေလုပ်နိုင်ပါတယ်။
1, 3-dimethylamylamine ရေတိုရေရှည်မှတ်ဉာဏ်နှင့်တုံ့ပြန်မှုအရေးယူမှုများ၏တိုးတက်မှုရှိသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်အဆီခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ရေးနှင့်မီးလောင်ရာအတွက်ကူညီပေးနေအပါအဝင်အများအပြားအကျိုးခံစားခွင့်ပေးထားပါတယ်။ သို့သော်သင်ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနှင့်ထိုကဲ့သို့သောသည်အခြားဆက်စပ်ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်များကြားတွင်မြင့်မားတဲ့သွေးဖိအား, နှလုံးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်ကျောက်ကပ်ဒဏ်ရာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုရှောင်ကြဉ်ဖို့အကြံပြုသောက်သုံးသောလိုက်နာကြောင်းသေချာစေရန်သင့်ပါတယ်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, လက်ျာသောက်သုံးသောမှလိုက်နာမှုသင်ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများတွေ့ကြုံခံစားမည်မဟုတ်ကြောင်းအာမခံချက်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင်သူကသာ DMAA ၏အသုံးပြုမှုကိုတိုက်ရိုက်, ဤသက်ရောက်မှုချိတ်ဆက်မျှသိပ္ပံနည်းကျသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်သည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ရကျိုးနပ်သည်, အခြားဖြည့်စွက်ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏မရှိခြင်းအတွက်ဖြစ်ပါသည်။
Bloomer RJ1, Farney TM, Harvey IC, Alleman RJ - ကဖိန်းဓာတ်၏အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးပရိုဖိုင်းကိုကျန်းမာယောက်ျားအတွက် 1,3-dimethylamylamine ဖြည့်စွက် - Hum Exp Toxicol ။ 2013 နိုဝင်ဘာ; 32 (11): 1126-36 ။ Doi: 10.1177 / 0960327113475680 ။ EPub 2013 ဖေဖော်ဝါရီ 19 ။
Schilling ကယ် (1), Hammond ဟာကီလိုဂရမ်, Bloomer RJ, Presley ဆီမှာဆိုရင် CS, Yates CR ။ BMC Pharmacol Toxicol - - အမျိုးသားများအတွက်ပါးစပ် 1,3-dimethylamylamine အုပ်ချုပ်ရေးဇီဝနှင့် pharmacokinetic ဆိုးကျိုးများ။ 2013 အောက်တိုဘာ 4; 14: 52 ။ Doi: 10.1186 / 2050-6511-14-52 ။
"1,3-Dimethylamylamine" 24 ဧပြီလ 2014 အပေါ်ထုတ်ဝေ Examine.com, နောက်ဆုံး, 14 ဇွန်လ 2018 အပေါ် updated
et al Vorce SP ။ Dimethylamylamine: အမ်ဖီတမင်းအဘို့အအပြုသဘော immunoassay ရလဒ်များကိုဖြစ်ပေါ်စေမယ့်မူးယစ်ဆေး။ J ကိုစအို Toxicol။ (2011)
Gee P ကိုဂျက်ဆင်က S, Easton ဂျေနောက်ထပ်ခါးသောဆေးလုံး: DMAA ပါတီဆေးပြားကနေအဆိပ်တစ်ဦးအမှု။ နယူးဇီလန် Med J ကို။ (2010)
အဆိုပါ Merck အညွှန်း: တစ်ခုကဓာတုပစ္စည်း၏စွယ်စုံကျမ်း, မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဇီဝ (စာအုပ်) ။
Lisi တစ်ဦးက, et al ။ ဖြည့်စွက် andgeranium ရေနံအတွက် methylhexaneamine ၏လေ့လာရေး။ မူးယစ်ဆေးစမ်းသပ်ခြင်းစအို။ (2011)
et al Bloomer RJ ။ ကျန်းမာတဲ့အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတွင်နှလုံးခုန်နှုန်းနှင့်သွေးဖိအားအပေါ် 1,3-dimethylamylamine နှင့်ကဖိန်းဓာတ်၏ဆိုးကျိုးများတစ်ဦးတည်းသို့မဟုတ်ပေါင်းစပ်။ Phys Sportsmed။ (2011)
7710 Views စာ
MAGL inhibitor နှင့် FAAH တား: JW-642 & ol-135 & PF-750
Trenbolone Enanthate Powder အကြောင်းအားလုံးအဆိုပါအရာ
Nandrolone Phenylpropionate (NPP) အမှုန့်
Stanozolol / Winstrol / Winnie အမှုန့်